Indlu yonke yimizuzu emi-5 ukusuka ePerquin - I-Airbnb
Indlu yonke yimizuzu emi-5 ukusuka ePerquin
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKevin
Indlu ilizwe elifanelekileyo lokuba iintsapho, izibini okanye abahlobo bafuna ukuba aphume yesiqhelo wesixeko, vuka ecaleni nemvelo aze achithe ikhefu niphumle okanye ukuba baninzi uyihlole ungatyelela ezinomtsalane kubakhenkethi eziyintloko zomgaqo yoxolo, ekubeni indlu 5 imizuzu ukusuka kumbindi Perquin. Kubathandi bebhola ekhatywayo iCable TV enamajelo ezemidlalo angaphezu kwe-10 kuquka imidlalo yeligi yaseSpain kunye ne-10 MB ekhawulezayo ye-WIFI.
Indawo yokuhlala inegumbi lokuhlala elikhulu, indlu ikulungele ukwenza eyona barbecue yakho kuba inegrill ezimbini, ikhitshi kunye neayini. Ukongeza, i-terrace enombono wenduli eyaziwayo ye-El Perricón. Amagumbi amabini; eyokuqala enebhedi yoKumkani kunye nebhedi eqhelekileyo. Eyesibini ibhedi yeQueen kunye nezimbini eziqhelekileyo. Okona kugqithisileyo kukho umlambo oziimitha ezingama-80 ngaphantsi kwendlu.
4.65 · Izimvo eziyi-37
Ukuba yidolophu enemozulu entle kunye namahlathi epine amaninzi, ilungele ukuziqhelanisa ne-ecotourism. UMlambo iSapo ubalasele kulo mmandla, nogqalwa njengowona mlambo umhle e-El Salvador. Amanzi ayo aluhlaza kunye nendlela akhiwe ngayo amatye ajikelezileyo ayinika umdla okhethekileyo.
I-Perquin ngomnye woomasipala abaye babandezeleka kakhulu ngexesha lemfazwe, nangona kunjalo, emva kokuba iphelile, yaqala ukubuyisela ubuhle bayo obukhethekileyo. Apha iziko lePerquin ligqame ngeepaki zalo kunye nabantu bayo. Kukwakho nemyuziyam ye-revolution kunye nenkampu yabanqolobi.
Ithafa labafi yindawo ebanzi emalunga namawaka amathandathu eehektare zamahlathi epine kunye namadlelo. Ibekwe phakathi koomasipala basePerquín naseArambala. Kulo mmandla wemida kunye neHonduras kukho iihostele ezininzi kunye neendawo zokutyela, ezinye zazo ezinokufikelela kwiingxangxasi ezinomtsalane, kubandakanya nale ibizwa ngokuba yi-El Perol. Ukuntywila emanzini awo ahlaziyayo ngamava anjengamanye.
Okona kuxhaphaza kakhulu kwi-perquin kukho ukungapheli kwemisebenzi ekufuneka yenziwe. Ungandixelela ngolwazi oluthe ngqo kwaye ndiya kukukhokela ngalo lonke ulonwabo emhlabeni.
Ndiyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo malunga neendawo onokuzindwendwela ngexesha lokuhlala kwakho. 7565-6322
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Perquín